Maleeshiyaad ka tirsan UGUS oo miino kula qaraxday deegaanka Bakalle – Radio Muqdisho
Maleeshiyaad ka tirsan UGUS oo miino kula qaraxday deegaanka Bakalle
Todobo ka tirsanaa Ururka Gumaadka Soomaaliyeed ee UGUS ayaa maanta ku geeriyooday miino ay doonayeen in ay ku dhibaateeyaan shacabka iyo mas’uuliyiinta isticmaala waddo ku taallo deegaanka Bakale ee gobolka Baay ku nool.
Dadka Deegaanka Bakalle oo la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in maleeshiyaadka UGUS ay la qaraxday miinada ay doonayeen inay dhulka ku aasaan si ay ugu dhibaateeyaan shacabka halkaasi ku nool.
Wariyaha Warbaahinta Qaranka ee gobolka Baay Siraaji Sheekh Isxaaq ayaa ku soo warramay in jidka ay miinada gelinayeen maleeshiyaadka geeriyooday ay saacado kahor halkaasi mareen wafdi uu hogaaminayay guddoomiyaha Bardaalle oo ka amba baxay magaalada Baydhabo ee xarunta Gobolka Baay.
“Todobo ka tirsan maleeshiyaadka ayay miinada kula qaraxday, deegaanka uu falkaan ka dhacay waxa ay u dhexeysaa magaalada Baydhabo iyo degmada Bardaalle, iyadoo dhanka waqooyi ay ka xigto degmada Awdiinle” ayuu yiri mid ka mid ah dadka deegaanka.
Dhowr jeer oo hore ayay sidan oo kale u qabsatay maleeshiyaad ka tirsan Ururka Gumaadka Soomaaliyeed ee UGUS miino ay aasayeen ay la qaraxdo, kuwaasi oo caadeystay inay shacabka dhibaateeyaan.
Kooxda Manchester United oo Ka Adkaatay Kooxda Liverpool “SAWIRRO”